Dhegeyso:Maamulka gobolka Nugaal oo ka hadlay qaraxii xalay Garoowe ka dhacay – Radio Daljir
Dhegeyso:Maamulka gobolka Nugaal oo ka hadlay qaraxii xalay Garoowe ka dhacay
Agoosto 30, 2015 4:36 b 0
Gudoomiye ku xigeenka gobolka Nugaal Cabdinaasir Xaaji Maxamed Warsame oo maanta Daljir la hadlay ayaa faah-faahin ka bixiyey qarax aan sidaas u waynayn oo xalay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Garoowe gaar ahaan nawaaxiga suuqa lagu magacaabo Inji.
Cabdinaasir ayaa tilmaamay in qaraxaasi uu ka danbayey wiil yar oo Fayuus ku tuuray gaari waddada marayey kadibna Fayuuskaasu uu ku qarxay gudaha gaariga, afar qof ayuu sheegy gudoomiye ku xigeenku inay qaraxaasi waxku noqdeen balse hadda ay dhamaantood caafimaad qabaan.
Wiilka ka danbayey qaraxan ayuu sheegay gudoomiye ku xigeenku in laamaha ammaanku haatan gacanta ku hayaan islamarkana baarayaan halka lagasoo abaabulay qaraxa, isagoona xusay inayka danbayeen ururka Al-Shabaab, dhinaca kale waxaa uu sheegay in warbaahinta qaar buun-buuniyeen qaraxan balse uusan ahayn sida loo baahiyey.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka ayaa docda kale sheegay in amaanka magaalada caasimadda ah ee Garoowe haatan yahay mid sugan ciidamada amaankuna si caadi ah ay ugu guda jiraan howlohooda amni.
Ugu danbayntii magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa kamid ah magaalooyinka ugu amniga badan gudaha Soomaaliya, qaraxan ayaa noqonaya ki labaad oo sanadkan gudahiisa ka dhaca magaalada, inkastoo uusan geysan khasaare saas u badan-Wariyeheenna Maxamed Xalliye oo Garoowe jooga ayuu u waramay.
Dowladda Ingriiska oo Midowga Afrika ka Dalbatay in la Baaro Dad shacab ah oo Ciidamada AMISOM ay ku Dileen Marka